Qaadista tijaabadad covid-19 - 1177 Vårdguiden
Provtagning för covid-19 vid symtom - Kalmar län - somaliska
Qaadista tijaabadad covid-19
Provtagning för covid-19 vid symtom - Kalmar län - somaliskaThe content concerns Kalmar län
Waxa uu gobolka Kalmar bixinayaa tijaabada PCR-ka taas oo tusaysa haddii uu jidhkaaga infegshan ku jiro marka tijaabada lagaa qaadaayo. Waxa uu Covid-19 badanaa ku xasuusinayaa hargab caadi ah ama saf isagoo leh calaamadaha sida qufaca, qandhada, dhibaatooyinka neefsashda, duuf, sanka oo ku xiran, cune xanuun, madax xanuun, shuban ama urta iyo dhadhanka oo kaa taga. Tijaabadu waa bilaa lacag. Ka fikir in haddii aad daryeel caafimaad u baahato aad sidii caadiga aheyd daryeel ugu raadsato.
Ayaa tijaabada covid-19 laga qaadi doonaa?
Haddii aad calaamado yeelato waa inaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah tijaabo iskaga qaadaa oo aad guriga joogtaa ilaa iyo inta ay jawaabtu kuu soo baxayso.
Qofka la nool qof laga helay infegshanku waa inuu iska baarto shan maalmood ka dib, marka laga bilaabo maalinta uu cudurka qaaday. Qofka wadanka dibadiisa ku maqnaa waa inuu sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah tijaabo iskaga qaadaa imaatinka Iswiidhan ka dib iyo mar labaad shan maalmood ka bacdi.
Qofka xiriirka dhow la lahaa qof covid-19 qaba oo ku jira xilligii uu dadka qaadsiinaayey waa inuu sidoo kale is tijaabisaa. Ka akhri waxyaalo dheeraad ah oo khuseeya qofka laga yaabo inuu fayruska qaaday.
Sidee ayaa tijaabada loo sameynayaa?
Tjaabo iska qaadida iyadoo aan wakhiil la isku xireynin
Adiga ayaa tijaabada iska qaadaaya - sanka iyo cunaha iyadoo la isticmaalaayo qoriga tijaabo qaadista. Waxa halkan ku yaal tilmaamo ku qoran af Ingiriis oo sida loo sameynaayo ku saabsan..
Waxaad adiga laftaadu soo qaadan kara bushqada tijaabo qaadista, laakiin waxaad sidoo kale dooran kartaa inuu taas wakhiil kuu sameeyo. Haddii uu wakiil kuu soo qaadaayo bushqada tijaabo qaadista waa inuu wakiilku aqoonsigiisa tusaa oo uuna sidoo kale sheego lambarkaaga shakhsiga oo dhan. Ka dib markaad tijaabada iska qaado ayaa tijaabada isla meeshii agu soo celinayaa.
Markaad adigu tijaabo iska qaadista ka qabsato 1177.se, ayaad arki doontaa goobaha la geynaayo ee la kala dooran karo. Mar danbe ku soo laabo, haddii ay waqtiyadii dhamaadeen.
Tjaabo iska qaadida iyadoo wakhiil la isticmaalaayo
Adiga ayaa tijaabada iska qaadaaya - sanka iyo cunaha iyadoo la isticmaalaayo qoriga tijaabo qaadista. Waxa halkan ku yaal tilmaamaha ku qoran af Ingiriis oo ku saabsan sida loo sameynaayo..
Waa inuu adiga wakiilka caafimaadka qabaa kuu soo qaado bushqada ay ku jiraan alaabta tijaabo qaadistu. Waa inuu wakiilku sii qaato isaga aqoonsigiisa iyo adiga aqoonsigaaga labadaba si tijaabada loogu soo dhiibo. Ka dib markaad tijaabada iska qaadid ayaa wakiilku taas isla meeshii uu ku celinayaa.
Markaad adigu tijaabo iska qaadistaada ka qabsatid 1177.se, ayaad arki doontaa goobaha la geynaayo ee la kala dooran karo. Mar danbe ku soo laabo, haddii ay waqtiyadii dhamaadeen.
Tijaabo iska qaadista iyadoo shaqaalaha daryeelka caafimaadka la kaashanaayo
Meelo gobolka ka mid ah qaarkood ayaa shaqaalaha daryeelka caafimaadku ay tijaabada kaa qaadi karaan.
Sidan ayaa loo sameeyaa si qaadista tijaabada loogu qabsado:
Dalbo baaritaanka covid-19 ee kaligaa leyska qaado
Guji linkigan: BESTÄLL PROVTAGNING
Soo gal adeega internetka ee 1177.se. Ogsoonow inaad u baahan tahay BankID ama Freja eID Plus si aad ugu soo gasho. (Mobilt SäkerhetsID ma shaqeynaayo.)
Guji ”Ny provtagningsbeställning”.
Dooro ”Covid-19 egenprovtagning utan krav på ombud”.
Tilmaamaha akhriso oo dooro ”Slutför beställning”.
Guji ”Boka tid och utlämningsställe här” taas oo ku hoos taala Boka tid och plats för uthämtning av protagningspaket.
Liistada muuqata ayaa ka dooranaysaa goob aad ka soo qaadato bushqada tijaabo qaadista. Waxaa jedwalka lagu tusaayo aad ka dooranaysaa maalinta iyo saacada.
Emaylkaaga ku qor qeybta qoraalka oo dooro ”Bekräfta”.
Dalbo tijaabo iska qaadista covid-19 ee wakiilka la isticmaalaayo
Dooro ”Covid-19 egenprovtagning, friskt ombud hämtar/lämnar”.
Liistada muuqata ayaad ka dooranaysaa goobta aad ka soo qaadanayso bushqada tijaabo qaadista. Waxaa jedwalka lagu tusaayo aad ka dooranaysaa maalinta iyo saacada.
Dalbo tijaabo iska qaadista covid-19 iyadoo daryeelka caadimaadka la isticmaalaya
Dooro ” Covid-19 provtagning med hjälp av vårdpersonal - utvalda hälsocentraler i Kalmar län”.
Waxaad Boka nu din tid för provtagning hoosteeda ka helaysaa ruggaha caafimaadka ee bixiya caawimada tijaabo qaadista covid-19. Dooro mid ka mid ah.
Hoos ugu dhaadhac oo guji ”Jag har tagit del av den fullständiga informationen”
Liistada tusmada ee Välj typ av tid hoosteeda ku taala ayaad ka dooranaysaa ”Provtagning covid-19 PCR”. Waxaa jedwalka lagu tusaayo aad ka dooranaysaa maalinta iyo saacada.
Guji ”Fortsätt till nästa steg i bokningen” oo ka dibna ”Ja, genomför bokning”.
Haddii aanad aqoonsi elektaroonig ah laheyn, aad 13 jir ka yar tahay ama ay dhibaato kaa haysato inaad soo gesho
La xiriir rugtaada daryeel caafimaad si ay qiimeyn ugu sameeyaan calaamadahaaga.
Waxaad caadi ahaan jawaabta tijaabada heli doonataa 3-4 maalmood gudahood, laakiin haddii cadaadis badan jiro ayay waqti dheer qaadan kartaa. Waxaad jawaabta tijaabada ka arkeysaa adigoo soo galaaya 1177.se
Waqtigan xaadirka ayaa dhammaan kiisaska covid-19 ee gobolka Kalmar laga xaqiijiyay dabogal lagu sameynayaa. Waxay taas micnaheedu tahay in haddii aad covid-19 qabtid ay shaqaalaha daryeel caafimaadku kula soo xiriiri doonaan.
Waxa tijaabadaada lagu keydin doonaa biobank.
Baajinta- ama dib u dhigista wakhtigaaga
Si aad ugu baajiso ama dib ugu qabsato wakhtigaaga soo qaadashada alaabta tijaabo qaadista ee farmasiiga/goobta la geynaayo haddii wakiil loo dirto iyo haddii kaleba - isticmaal linkiga wakhti bedelista ee la socota emaylka xaqiijinta ee aad heshay markaad wakhtiga ballanta qabsatay.
Si aad ugu baajiso ama ugu bedesho wakhtiga tijaabo qaadista iyadoo shaqaalaha daryeelka caafimaadka la kaashanayo soo gal 1177.se. Waxaad Inkorg hoostiisa ka gujinaysaa Bokade tider. Ka dib dooro in wakhti la baajiyo iyadoo la gujinaayo ”avboka” ama wakhtigaaga tijaabo qaadista bedel iyadoo la gujinaayo ”omboka”.
Tijaabo qaadista shahaado lagu doonaayo
Anagu hadda ma bixinno tijaab qaadis noocyada kala duduwan ee shahaadooyinka ah.
Miyaad su'aalo qabtaa?
Haddii aad su'aalo kale oo tijaabo qaadista ku saabsan qabto ayaad la xiriiri kartaa corona@regionkalmar.se.
Ka fikir inaanad xogta shakhsi ahaaneed ee xasaasi ah emaylka ku dirin.